I-Spark Plug ye-Spark Plug yayiza kuba yiNzame kakhulu kwiNdalo
Abanye ababhali beembali baye babika ukuba uEdmmond Berger owakha i-spark plug yokuqala (ngamanye amaxesha kwisiNgesi saseBrithani esibizwa ngokuba iplagi). Ngoko-ke, u-Edmond Berger akazange enze ilungelo lobunikazi bakhe.
Kwaye kuba iiplastiki zisetshenziselwa iinjinjini zangaphakathi zomsakazo kwaye ngo-1839 ezi njini zazinsukwini zokuqala zokuvavanya. Ngoko ke, u-Edmund Berger's spark plug, ukuba bekukho, bekuya kufuneka ukuba ube nokulinga kakhulu kwimvelo kunye okanye mhlawumbi umhla ube yimpazamo.
Yintoni iPlask Plug?
Ngokutsho kweBrithannica, iplagi ye-spark okanye iplagi "iyisisitshi esinga kwinhloko ye-cylinder ye-injini engaphakathi yomsakazo kwaye ithwala ama-electrode amabini ahlukaniswe ngengozi ye-air apho ikhoyo ngoku ukusuka kwinkqubo yokutshabalalisa i-high-voltage system ikhupha ukutshisa umbane. "
Ngokukodwa, iplagi ye-spark ine-shell edibeneyo yensimbi ekhutshiswe ngombane kwi-electrode ephakathi yi-insulator ye-porcelain. I-electrode ephakathi ixhunyiwe ngetambo ekhutshelwe kakhulu kwi-terminal yesiphumo se-coil yomlilo. Igobolondo yentsimbi ye-spark igxothwa kwi-injini ye-cylinder intloko kwaye ngoko ke umbane ugxininiswe.
I-electrode ephakathi ijikeleza nge-insulator ekwindawo yokufudumala, ekwakheni enye okanye ngaphezulu kweengcambu phakathi komda wangaphakathi we-electrode kunye kunye neprotuberance okanye izakhiwo ezininzi ezixhomekeke kwisigxina sangaphakathi segobolithi edibeneyo kwaye ikhethe umhlaba. okanye i-electrode yomhlaba .
Indlela iPark Spg Work
Iplagi ixhunyiwe kumbane ophezulu oveliswa yileyili yomlilo okanye i-magneto. Njengoko ukuhamba kwamanzi ukusuka kwikhoyili, i-voltage ikhula phakathi kwe-electrodes ephakathi nendawo. Ekuqaleni, akukho nto ikhoyo ngoku iyakwazi ukuhamba ngenxa yokuba ugesi kunye nomoya kwi-gap ngumshubhe. Kodwa njengoko i-voltage iphakama ngakumbi, iqala ukutshintsha isakhiwo segesi phakathi kwama-electrode.
Emva kokuba i-voltage idlula amandla edayelectric of the gases, i-gases i-ionized. I-gas eononiweyo iba ngumqhubi kwaye ivumela ukuba ikhoyo iqhubekele ngaphaya kweli gaba. Iiplagigi zidla ngokufuna i-voltage ye-12,000-25,000 ii-volts okanye ngaphezulu "ukutshisa" ngokufanelekileyo, nangona ingafikelela kuma-voltage angama-45,000. Banikezela ngoku phezulu kwixesha lokukhutshwa komsebenzi, okubangela ukunyuka kwexesha elide kunye nexesha elide.
Njengoko i-electrons yamanje ihamba ngaphaya kweli qhekeza, iphakamisa izinga lokushisa lomzila we-spark ukuya kuma-60,000 K. Ukufudumala okukhulu kwitshini ye-spark kubangela ukuba i-gesi eononiweyo ikhule ngokukhawuleza kakhulu, njenge-explosion encinci. Le "nqakrazo" evezwe xa ukhangele i-spark, efana nombane neendudumo.
Ukushisa kunye noxinzelelo lubangela ukuba amagesi asebenzisane. Ekupheleni kweso siganeko, kufuneka kubekho ibhola elincane lomlilo kwi-spark gap njengoko iigesi zitshisa zodwa. Ubungakanani beli fireball okanye i-kernel kuxhomekeke ekubunjweni ngqo komxube phakathi kwama-electrode kunye nenqanaba lokuqhuma kwegumbi lokutshabalalisa ngexesha le-spark. I-kernel encinci iya kwenza injini isebenze ngokungathi ixesha lokutshisa liye laphelelwa, kwaye enkulu njengokuba ixesha liqhubekile.
Iziqulunqo zikaLeonardo da Vinci
Imbali emfutshane yeK Clarinet
Iimpawu Eziqhakamshelayo Ngezidumbu
I-APA Break 8-Ibhola iMithetho kunye neSicwangciso
Indlela yokuyeka iKholeji